ताराखोलामा आएको बाढिका कारण स्थानीय एक युवा बेपत्ता, पशुचौपाया बगे - ढोरपाटन पोष्ट
ताराखोलामा आएको बाढिका कारण स्थानीय एक युवा बेपत्ता, पशुचौपाया बगे
२०७८ असार २३, बुधबार ११:१३
गयरापति बागलुङको ताराखोलामा अबिरल बर्षापछि आएको बाढीले बगाएर एक युवा बेपत्ता भएका छन् भने पशु चौपाया समेत बगाएको छ । गत मंगबार साँझदेखि निरन्तर परेको बर्षासँगै आएको लेदोसहितको बाढीले ताराखोला गाउँपालिका वडा नं. ३ हिल स्थित घुस्मेलीका १८ वर्षीय राजेन्द्र कार्कीलाई बगाएको हो ।
खोला छेउमा रहेको बाख्रा फार्म बाढीबाट जोगाउने प्रयास गर्दागर्दै उनलाई खोलाले बगाएको स्थानीयले बताएका छन् । पहिरोमा परि सम्पर्क बिहिन रहेका कार्कीको खोजी भैरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ताराखोलाका प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । बढिले स्थानीय चन्द्र कार्कीको ४१ वटा बाख्रा पुरेको छ ।
वर्षाका कारण ताराखोला गाउँपालिका– वडा नं. १ हिलको इदि टोलमा केही परिवार बिस्थापित छन् । ताराखोलाकै अर्गलमा एक घर पुरिएको छ । मानवीय क्षती भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीसंगै खोलामा पानीको बहाब बढेर घुस्मेली बजार क्षेत्रमा पस्न थालेपछि स्थानीय त्रसित छन् । बजार क्षेत्रका २५ परिवारलाई गत रातिनै सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । उद्दारकालागि इलाका प्रहरी कार्यालय गलकोटबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीको थप टोली घटनास्थलमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
भारतीय प्रख्यात अभिनेता दिलिप कुमारको निधन
म्याग्दीमा बाढीले घर बगायो दुईजनाको मृत्यु